Shina 2100KG, 2500KG Mpisintona Force Precast Concrete Magnet Assembly ho an'ny Steel Formwork na Plywood Mould Fixing mpanamboatra sy mpamatsy | Meiko Magnetics
2100KG, 2500KG Manintona Force Precast Concrete Magnet Assembly ho an'ny Steel Formwork na Fanamboarana bobongolo Plywood
2100KG, 2500KG Precast Concrete Magnet dia karazan-kery mahazatra ahafahana manidy andriamby, izay tena ampirisihina hampiasaina amin'ny fanamboarana sidemould amin'ny takelaka sandwich vita amin'ny beton.
2100KG Precast Concrete andriamby dia karazana fahaiza-manao mahazatra ho an'ny manidy andriamby, izay tena amporisihina hampiasaina amin'ny fanamboarana ny sidemould amin'ny takelaka sandwich vita amin'ny beton. Izy io dia afaka mifanaraka tsara amin'ny volavola vy na volavolan-trondro vita amin'ny hazo, miaraka amina adaptatera samihafa. Ny sary aseho dia fitaovana mifandraika amin'ny bobongolo vita amin'ny hazo na plywood.
Aorian'ny fanerena ny bokotra dia mitazona mafy ny latabatra ireo andriamby boaty. Mora ny mametaka ny lovia vy amin'ny lovia hazo amin'ny fantsika, azo alefa amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny bokotra amin'ny tanana na amin'ny tongotra. Mba hamonoana azy ireo dia avoaka mora foana ny andriamby amin'ny alàlan'ny vy (hametahana ny bokotra). Amin'ny toerana tsy miasa dia azo esorina mora foana avy eo amin'ny endrika latabatra ny andriamby manidy. Ireo andriamby simenitra mialoha dia azo ampiasaina irery na mifandray amin'ny adpator hanamboarana ny formwork. Raha ny tokony ho izy 2100Kg andriamby boaty hery mitsangana dia mety tsara amin'ny famokarana tontonana 60-90mm rindrina matevina. Azontsika atao ihany koa ny manfuacture andriamby boaty herin'aratra hafa, na dia 2500KG, karazana 3000KG aza araka ny takinao.
Tombontsoa lehibe an'ny andriamby fanakanana mialoha:
1. Fampihenana ny fahasarotana sy ny fotoana fametrahana ny formwork (hatramin'ny 70%).
2. Fampiasana manerantany ho an'ny famokarana betsaka ny vokatra vita amin'ny beton, ary ny vokatra vita amin'ny endriny rehetra amin'ny latabatra vy iray ihany.
3. Manafoana ny filàna welding, ny manidy ny andriamby dia tsy manimba ny latabatra vy.
4. Ahafahana mamokatra vokatra radial. Andriamby fanapahana Formwork ho an'ny orinasa Precast
5. Vidiny kely andiana andriamby. Ny karama averimberina manodidina ny 3 volana.
6. Ny tombony lehibe amin'ny magnets shutting dia ny tsy mila manana endrika maro samihafa amin'ny vokatra samihafa, mila manana andiana andriamby, adaptatera ho an'ny takelaka avo sy latabatra vy ianao. Progn Concrete Shuttering Box Magnet 900kg
Karazana L W H Sokiro Hery NW
MG MG MG KG KG
Izahay, Meiko Magnetics, matihanina amin'ny karazana vahaolana mavitrika amin'ny indostrian'ny beton mialoha. Azonao atao ny mahita eto daholo ny fepetra takiana mahazatra anao na ny rafitra magnetika namboarina.
Teo aloha: Magnetsera fanapahana 1800KG miaraka amin'ny bokotra on / off ho an'ny rafitra fanamboarana trano efa vita mialoha
Manaraka: Neodymium Disc Magnets, Round Magnet N42, N52 ho an'ny Electronic Applications
Neodymium Magnet tsy ara-dalàna miaraka amin'ny Black Epxoy Coa ...
Magnetsaka boribory miorina amin'ny fingotra ABS ho an'ny fametrahana ...
Steel Lever Bar amin'ny famoahana ny bokotra Push / Pull ...